Zip Fitaovana fanamboarana. fanamboarana Zip File. Zip Amboary ny rindrambaiko.
Nahoana DataNumen Zip Repair?
Ny tahan'ny fanarenana dia ny most mason-tsivana lehibe a zip vokatra fanarenana. Miorina amin'ny fitsapana feno nataonay, DataNumen Zip Repair manana ny tahan'ny fanarenana tsara indrindra, tsara lavitra noho ny mpifaninana hafa rehetra, ao anatin'izany ny WinRAR sy ny hafa zip fitaovana fanamboarana, eny an-tsena!
Mianara bebe kokoa momba ny fomba DataNumen Zip Repair mifoka ny fifaninanana
Niezaka nanokatra arisiva misy sary taloha aho, saingy tsy afaka, noho ny lesoka sasany. Avy eo nampiasaiko DataNumen Zip Repair ary nanao ody io.
Aprily 22nd, 2020
Marketer efa misotro ronono
Vao avy nahazo sary 1GB eo ho eo Zip raki-daza. Nihevitra aho fa tena tototry ny entana fa DZIPVao niasa tany fotsiny i R
Nanohana rakitra vitsivitsy aho a Zip fisie avy amin'ny kahie Mac G4-ko. Tsy nanan-tsafidy aho afa-tsy ny mamerina azy ireo amin'ny PC, ary amin'ny fanandramana unzip, Hitako io
Taorian'ny fanamboarana ny batch, ny rakitra rehetra dia namboarina tamim-pahombiazana ary mivoaka amin'ny mac amin'ny alàlan'ny windows PKZip ary SaMBa Network Drive izay misy sarintany. aho
Vokatra tena tsara !! Nisalasala aho fa vao tafarina ilay backup zip an'ny arisivan'ny mailaka nataoko ary niova aho :)
Misaotra betsaka ary
Miasa tsara. namonjy ahy antontam-potoana fa tsy ny fisintomana ilay rakitra avy amina loharano hafa satria simba ny fisie, ity programa ity no manamboatra azy. ny
Nitady toerana hanaovana post deraina fa tsy mahita na inona na inona. Tiako ny manampy ny hafa izay tafiditra anaty olana amin'ny mpanao kolikoly zip rakitra. Izaho dia
nanana lalao maro aho, ary karazana rakitra hafa izay efa nanao kolikoly, ary talohan'ny nahazoako ity programa ity dia nanakorontana ny solosainako, ity dia iray amin'ireo
Nanandrana vokatra marobe aho tamin'ny fikatsahako sitrana a Zip fisie izay nahitana arsiva e-mail feno iray taona nefa tsy nahomby, mandraka ankehitriny. aho
Soso-kevitra: fahaiza-manao lisitra
Nahazo ny simbaiko rehetra *.zip raki-daza. Ny olana tokana dia hoe nisy olana tamin'ny *.zip fisie izay izy ireo ihany zipped. Raha tsy izany dia mivoaka 10
Mamelombelona ny mahita programa mahasoa tsotra etsy sy eroa
Most amin'ny fotoana tokony hikororohana ny anao tsotra raha misintona a zip rakitra ary manana hadisoana crc, indrindra raha ny zip rakitra
Tena programa tena tsara, ho an'ireo olona misintona rakitra sfx be amin'ny internet izay simba dia atoroko an'ity rindrambaiko ity! izany
Tena programa tena tsara, ho an'ireo olona misintona rakitra sfx be amin'ny internet izay simba dia atoroko an'ity rindrambaiko ity! manamboatra zip tsara be ny rakitra sy ny rakitra sfx! saingy mieritreritra aho fa mila mahay manamboatra ity rindrambaiko ity rar fisie koa :(
Izany mihitsy! Azonao atao ny mampiasa ny fizarana voalaza ao amin'ny tranonkalanao na ny literatiora promo. Manomeza fanampiana ahy ary amboary ny referansa CRC, satria CRC sy
Ianao dia hahazo ny vatoko amin'ny alàlan'ny fampiasana PC tsara indrindra. Hatramin'ny nividianako an'i DZIPR, imbetsaka aho no nampiasa izany tamin'ny fisie izay mampiseho CRC ratsy na manana hafa
adiny roa lasa izay ary nety tsara !!! Azo fintina ny zavatra niainako
Nanana 800 MB aho zipfisie miaraka amina 97,00 noforonina tao Solaris izay nahazo lesoka tamin'ny "dir dir". Raha vantany vao niseho izany dia tsy afaka niditra mihoatra ny
Nahita ny fitaovanao aho tamin'ny fampiasana tranokala http://rmse.awardspace.com ary tiako ny milaza fa mahafinaritra ny fitaovanao amin'ny fisongadinana maro.
Tsy maninona fa niasa! SOOO HAPPY aho! Misaotra betsaka amin'ny fanampianao rehetra! Afa-po 100% aho izao ary tsy hanelingelina anao intsony. tpt. MISAOTRA
Tena tiako ny anao
Misaotra anao mamaly haingana sy feno. Nandeha ny vahaolana! Ny rindrambaiko Large File Splitter dia niasa ary nandroso avy eo Zip
Nanana Gigabyte 60 izahay zip fisie izay tsy hisokatra. Advanced Zip Repair tsy afaka nanamboatra azy io satria lehibe loatra. Na izany aza, DataNumen nanome ahy
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Zip Repair v3.5
Afaka manamboatra ireo karazana sokajy rehetra Zip rakitra sy karazana rakitra manaisotra tena.
Zahao ny fahamendrehan'ny angona ary amboary ny soatoavin'ny CRC tsy marina ao amin'ny arisiva.
Fanohanana amin'ny fanamboarana Zip raki-daza sy Zip antontan-taratasy lehibe kokoa noho ny 4GB.
Fanohanana amin'ny fanamboarana namboarina Zip fisie, fisarahana Zip rakitra ary voahidy Zip raki-daza.
Fanohanana amin'ny fanamboarana Zip fisie amin'ny media maloto, toy ny floppy disk, Zip kapila, CDROM, sns.
Tohana hanamboarana antontan-taratasy.
Tohano hahitana sy hisafidy ny Zip rakitra tokony hamboarina amin'ny solo-sain'ny mpanjifa.
Fanohanana hamoahana ireo entana sitrana ao anaty raikitra Zip na archive SFX.
mampiasa DataNumen Zip Repair hamerina simba Zip Tahiry
Raha ny anao zip simba na simba ny fisie ary tsy azonao atao ny manokatra azy ireo mahazatra, azonao ampiasaina DataNumen Zip Repair hijerena ny zip manaova rakitra ary alao angona betsaka araka izay azo atao avy amin'izy ireo.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenana izay simba na simba zip raki-daza miaraka DataNumen Zip Repair, azafady manakatona ireo rindranasa hafa mety manova ny zip raki-daza.
Safidio ny simba na simba zip fisie hamboarina:
Azonao atao ny mampiditra ny zip anaran'ny rakitra mivantana na kitiho ny
bokotra hahitana ny zip rakitra hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Default (nitranga in- DataNumen Zip Repair hanamboatra ny zip rakitra ary esory ny entana rehetra ao aminy ao anaty lahatahiry antsoina hoe xxxx_recovered, izay xxxx no anaran'ilay loharano zip rakitra. Ohatra, ho an'ny loharano zip rakitra Simba.zip, ny lahatahiry output default dia ho Damaged_recovered. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
bokotra hijerena sy hisafidianana ny lahatahiry output.
bokotra, ary DataNumen Zip Repair start scanning sy fanamboarana ny loharano zip rakitra. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotry ny fanamboarana, raha ny loharano zip Azo amboarina soa aman-tsara ny fisie, ho hitanao boaty hafatra toy izao:
Ankehitriny ianao dia afaka manokatra ny lahatahiry famoahana ary miditra amin'ireo entana ao amin'ny Zip hametraka.
DataNumen Zip Repair 3.5 dia navoaka tamin'ny 4 Mey 2021
DataNumen Zip Repair 3.2 dia navoaka tamin'ny 19 Desambra 2020
DataNumen Zip Repair 3.0 dia navoaka tamin'ny 30 Oktobra 2020
DataNumen Zip Repair 2.9 dia navoaka tamin'ny 5 Mey 2020
Tohana hanehoana fidirana amina ambaratonga samihafa.
DataNumen Zip Repair Navoaka tamin'ny 2.8 aprily 22 ny 2020
Hatsarao ny taham-pahavitrihana ho an'ireo entana nafenina.
DataNumen Zip Repair 2.7 dia navoaka tamin'ny 21 Oktobra 2019
Hatsarao ny taham-panarenana ho an'ireo zavatra simba amin'ny ampahany.
DataNumen Zip Repair Navoaka tamin'ny 2.6 Aogositra 20 ny 2019
DataNumen Zip Repair Navoaka tamin'ny 2.5 Novambra 7 ny 2018
DataNumen Zip Repair Navoaka tamin'ny 2.3 aprily 10 ny 2018
Esory amin'ny fiara ny entana azo averina ao amin'ny Zip tahiry.
DataNumen Zip Repair 2.2 dia navoaka tamin'ny 21 septambra 2013
DataNumen Zip Repair 2.1 dia navoaka tamin'ny 21 Jolay 2013
Hatsarao ny fanohanan'ny rakitra lehibe.
DataNumen Zip Repair 2.0 dia navoaka tamin'ny 23 Novambra 2012
Soraty indray ny motera fanarenana rehetra.
Support Zip file and Zip entana lehibe kokoa noho ny 4GB.
DataNumen Zip Repair 1.8 dia navoaka tamin'ny 25 Oktobra 2006
Hatsarao ny tohana hatramin'ny zara / misaraka zip raki-daza.